प्रहरीले गोली चलाउदा एक हतियारधारीको मृत्यु – YesKathmandu.com
प्रहरीले गोली चलाउदा एक हतियारधारीको मृत्यु
सोमबार २९, कार्तिक २०७३
रौतहटको देवाहीमा सोमबार बिहान सशस्त्र समूह र प्रहरीबीच गोली हानाहान हुदा एक जना सशस्त्र हतियारधारीको मृत्यु भएको छ ।
हाँमी ले गाँउमा सशस्त्र हतियारधारी समूह पसेको सुनचना पाएपछि प्रहरी परिचालन गरेका थियौ । प्रहरी टेली र हतियारधारी समुह बिच सोमबार बिहान दोहोर गाली हानाहान हुदा एक जान हतियारधारीको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रौतहटका डिएसपि नवीन कृष्ण भण्डारीले भने ।
जिल्ला प्रहरी कार्यलयको टोली सोमबार बिहान छ बजे देवाही आठ मा पुग्दा चार जनाको समूहम हरेका हतियारधारी सँग दोहोरो गोली हानाहान भएको र गोली हानाहानमा एक जना हतियारधारीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुने को भने सनाखत हुन सकेको छैन् ।
गोली हानाहानमा प्रहरी जवान सुरेन्द्र चौधरी घाईते भएका छन् । उनलाई उचारको लागी हेटौंडा लगीएको छ । घटनास्थल बाट प्रहरीले एक थान इन्सास राईफल त्यसको गोली १५ थान, इटालीएन पेस्तोल एक थान, त्यसको म्यग्जिन र कटुव पेस्तोल एक थान बरामत गरेको डिएसपी भण्डारीले बताएका छन् ।
बरामत भएको इन्सास राईफल नेपालमा नेपाली सेनाले मात्रै प्रोग गर्छन भने भारतमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी प्रयोग गर्द छन् ।
एक करोड दश लाखको बिटाले धानेको प्रचण्डको इज्जत !
सुजाता रमाउँदै गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा कड्किँए
मोर्चाको सभालाई लिएर किन तर्सियो सरकार ?
बर्दिवासमा ८ तोला सुनसहि एक जना पक्राउ
गोपाल किरातीको खसखस, केपी र प्रचण्डबिरुद्ध सडक आन्दोलनमा
सर्वाेच्च अदालतमा कालो सर्प देखेपछि राजीनामा दिएँ-पराजुली
‘जर्वजस्ती संविधान बनाउने एमालेविरुद्ध हामी होइन, मधेसी जनताहरु लड्छन्’
प्रकाशशरणको काँधमा राखेर देउवाले पड्काए बन्दुक
आज नारी दिवस, प्रधानमन्त्रीले गरे नारीहरु लाई सम्बोधन
हिमानी र देवयानीको अद्धभुत सम्बन्ध, शाहबंशीय कुलदेवता खोज्दै गोरखनाथदेखि आलमदेवीसम्म
भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा फेरी विमानस्थलबाट ३५ लाखको सुन बाहिरियो